Ithegi: Isonka esingaphaya | Martech Zone
Ithegi: Isonka esingaphaya
Ungayibhala njani iSicatshulwa seVidiyo esinamandla nesisebenzayo
NgoLwesihlanu, Julayi 24, 2020 NgoLwesihlanu, Julayi 24, 2020 Douglas Karr
Ndigqibezela ngemveliso yokucacisa ividiyo yomthengi wethu kule veki. Yinkqubo elula, kodwa kwakubalulekile ukuba ndinciphise iskripthi ukuqinisekisa ukuba sifutshane, sinempembelelo, kwaye sigqibelele kangangoko kunokwenzeka ukuqinisekisa ukuba ividiyo echazayo inefuthe eliphezulu. Inkcazo yeeVenkile ezichazayo Ngokomndilili, ababukeli babukela imizuzwana engama-46.2 ye-60 yemizuzwana yokuchaza ividiyo Indawo emnandi yokuchaza ubude bevidiyo ngama-60-120
Friday, July 24, 2020 Friday, July 24, 2020
Qikelela ukuba? Ividiyo emi nkqo ayisiyiyo nje eqhelekileyo, iyasebenza ngakumbi
NgoLwesihlanu, Oktobha 12, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kwiminyaka nje embalwa edlulileyo bendihlekiswa esidlangalaleni ngumntu endisebenza naye kwi-Intanethi xa bendisabelana ngezam iingcinga ngevidiyo. Ingxaki yakhe ngeevidiyo zam? Ifowuni bendiyibambe nkqo endaweni ethe nkqo. Ubuze ubuchwephesha bam kunye nokuma kolu shishino ngokusekwe kuqhelwaniso lwevidiyo yam. Yayimpambano ngenxa yezizathu ezimbalwa: IiVidiyo zizonke malunga nokukwazi kwabo ukuthimba nokuthumela umyalezo. Andikholelwa ukuba ukuqhelaniswa kunefuthe
Yimalini indleko zokucacisa ukuveliswa kweVidiyo?
NgoMgqibelo, Septemba 2, 2017 NgoMgqibelo, Septemba 2, 2017 Douglas Karr
Iarhente yam ikhuphe imisebenzi embalwa yokucacisa ividiyo kubathengi bethu. Sifumene iziphumo ezimangalisayo kwiminyaka edlulileyo xa uzisebenzisa, kodwa amaxabiso ahluka kakhulu. Ngelixa ividiyo echazayo inokubonakala intle ngqo phambili, zininzi iindawo ezihambayo zokudibanisa ividiyo echazayo: Iskripthi-esichazayo ingxaki, sinike isisombululo, sahlule uphawu, kwaye sinyanzele umbukeli ukuba athathe inyathelo